Home » Lahatsoratra farany farany » Sports » Expo 2020 Dubai dia nahazo fanaterana manokana avy amin'ny US Open
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Entertainment • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Sports • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Any ivelan'i New York, ny kitapo tenisy dia haparitaka ao anatin'ny vavahadin'i Emirate sasany any Etazonia.
Don Victor Mooney no mpilalao tenisy Mainty voalohany nahazo amboara tokana tamin'ny US Open, ny Australian Open ary Wimbledon.
Don Victor Mooney dia manangona raketa tenisy, baolina ary fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy mandritra ny US Open.
Noho ny COVID-19 pandemika vaovao Expo 2020 Dubai dia datin'ny 1 Oktobra 2021 - 31 martsa 2022.
Nivoy lakana namakivaky ny Atlantika izy ary nandeha bisikileta tany Emirà. Ankehitriny, Don Victor Mooney, filohan'ny tetik'asa resilience HR 1242, dia manangona rakotra tenisy, baolina ary fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy mandritra ny US Open. Nantsoina hoe: Operation Arthur Ashe ny fanentanana. Arthur Ashe dia nandresy ny herin'ny boky sy ny kianja tenisy. Ashe no mpilalao tenisy Mainty voalohany nahazo amboara tokana tamin'ny US Open, ny Australian Open ary Wimbledon.
Hifarana amin'ny 12 septambra ny fanentanana fanangonana sy famonosana entana. Any ivelan'i New York dia hozaraina ao anaty vavahady sasany an'ny Emirate any Etazonia ny kitapo tenisy. Ny kitapo tenisy farany dia hatolotra ao amin'ny Dubai Expo 2020, izay hisokatra amin'ny 1 Oktobra 2021.
If Emirates Manana traikefa maharitra any New York ny ekipazy ao an-tranony, tongasoa izy ireo hanampy anay amin'ny fonosana kitapo tenisy vitsivitsy, hoy i Mooney.
Expo 2020 dia nalamina ho Expo Eran-tany izay hampiantrano an'i Dubai any amin'ny Emira Arabo Mitambatra, natokana tamin'ny 20 Oktobra 2020 - 10 aprily 2021. Saingy, noho ny areti-mandringana COVID-19 any amin'ny Emira Arabo Mitambatra, ny daty 1 Oktobra , 2021 - 31 martsa 2022.